Soomaaliland oo ka bilaabatay codbixinta doorashada | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Soomaaliland oo ka bilaabatay codbixinta doorashada
Soomaaliland oo ka bilaabatay codbixinta doorashada
Soomaaliland(SONNA) Shacabka Somaliland ayaa saaka u dareeray goobaha codbixinta doorashada madaxweynaha Soomaaliland,iyadoo la arkayo dadweyne aad u farabadan oo safuuf dhaadheere kujira si ay codkooda u dhiibtaan.
Gudoomiyaha guddiga doorashada ee Somaliland Siciid Cali Muuse ayaa sheegay in uu goobo badan soo kormeeray kuwa kalana la xiriiray, codayntu ay billaabatay 7:00 subaxnimo,waxaana la filayaa in dadka reer Soomaaliland ay doortaan hoggaan cusub.
Shaqo-la’aanta ayaa ka mid ah ah arrimaha muhiimka ah ee isha lagu hayo, iyadoo boqolkiiba todobaatan iyo shan dadka da’da yar aanay wax shaqo ah haysan.
Waxaa ku tartamaysaa ilaa 3 musharax eek ala ah Muusa Biixi,Faysal Cali Waraabe,iyo C/raxmaan Ciiro,kuwaasi oo midkasta sugaya natiijada ka soo bixi doonta doorashada,waxaana sidoo kale codaynaya musharixiinta.
Mas’uuliyiinta Somaliland ayaa waxa ay ku baaqeen in maalinta codbixinta la xayiro isticmaalka baraha bulshada si looga hortago in barahaasi lagu faafiyo warar been abuur ah.
Waxa ku sugan Soomaaliland korjoogayaal caalami ah kuwaasi oo u kuurgalaya xaaladda guud ee Doorashada,waxayna sugayaan habka ay u dhacayso doorashadaasi.
Previous articleWasiir kuxigeenka Amniga Gudaha oo qaabilay wafdi ka socda Dowladda Rwanda
Next articleSafiirka Soomaaliya ee K/Afrika oo la shiray ganacsatada+Sawirro